I-China Laryngeal Mask Airway yoSetyenziso oluNye mveliso kunye nabenzi | Kangyuan
• I-100 grade ibakala lonyango abicah lokuhambelana okungaphezulu.
• Uyilo lwe-non-epiglottis-bar lubonelela ngokulula nangokucacileyo ngokukhanya.
• Imigca emi-5 ye-angular iyavela xa ikhafu ikwimo ethe tyaba, enokuthintela ikhafu ukuba ikhubazeke ngexesha lokufakwa.
• Isitya esinzulu sekhofu sinika ukutywina okugqwesileyo kunye nokuthintela ukuphazamiseka okubangelwa yi-epiglottis ptosis.
• Unyango olukhethekileyo lomphoko weephungwe kunciphisa ukuvuza kwaye lutshintshe ngokufanelekileyo.
• Ilungele abantu abadala, abantwana kunye neentsana.
Ukupakisha:Iifayile ezi-5 / ibhokisi. Iifayile ezingama-50 / ibhokisi
Ubungakanani beCarton: 60x40x28 cm
Imveliso ilungele ukusetyenziswa kwizigulana ezifuna i-anesthesia ngokubanzi kunye nokuvuselelwa okungxamisekileyo, okanye ukuseka indlela yomoya yexesha elifutshane engekho emiselweyo kwizigulana ezifuna ukuphefumla.
Le mveliso ngokwesakhiwo inokwahlulahlulwa ibe luhlobo oluqhelekileyo, uhlobo olomelezwe kabini, uhlobo oluqhelekileyo, eziphindwe kabini iintlobo ezine. Uhlobo oluqhelekileyo lokungenisa umoya, ityhubhu yokufaka izixhobo, ityhubhu engenayo, ebonisa i-airbag, ivalve edibeneyo kunye ne-inflatable; iqiniswe yityhubhu yokungenisa umoya, isinxibelelanisi sebhegi, umbhobho womoya. Ukuboniswa kwentonga yesikhokelo somoya, (ayinakho), kunye nevalve yokudibanisa ngokudibeneyo; uhlobo oluqhelekileyo oluphindwe kabini ngumbhobho wokungenisa umoya, ityhubhu yokuhambisa amanzi, izinto zokubopha ezingaphezulu, ityhubhu engenayo, ebonisa i-airbag, ivalve edibeneyo kunye ne-inflatable; Umbhobho ophindwe kabini uqiniswe ngumbhobho wokungenisa umoya, umbhobho wokuhambisa amanzi, izixhobo zokubopha ezingaphezulu, ityhubhu engenayo, isalathiso ibhegi yomoya, iphedi yomkhono wokudibanisa, intonga yesikhokelo (hayi), indibaniselwano kunye nevalvu yokutshaja. Yomeleza kwaye iphinde yomelezwe imaski yokugcoba eludongeni lwangaphakathi lweetrachea kunye neemveliso zentsimbi ezingenazingcingo. Ukomeleza ityhubhu yokungenisa umoya, ityhubhu yokuhambisa amanzi, isiciko sokudibanisa ibhegi, iphedi yokudibanisa, ityhubhu engenayo, ingxowa yomoya yamkela imiyalelo eyenziwe ngezinto zerabha yesilicon. Ukuba imveliso iyinyumba; ring Oxygen inzala ethane, iintsalela ethylene oxide kufuneka ibe ngaphantsi kwe 10μg / g.
[Umzekelo wendlela] jonga itafile engezantsi:
Uhlobo oluqhelekileyo, uhlobo oluqinisekisiweyo,
Uhlobo oluqhelekileyo olunombhobho ophindwe kabini,
Uhlobo lwesinyanzelo kunye ityhubhu kabini
Ukunyuka kwamaxabiso (Ml)
Isigulana esisebenzayo / ubunzima bomzimba (kg)
Umntwana 6 ~ 10
Abantwana 10 ~ 20
Abantwana 20 ~ 30
Abantu abadala 30 ~ 50
Abantu abadala 50 ~ 70
Umntu omdala 70 ~ 100
Umntu omdala ＞ 100
1. I-LMA, kufuneka itshekishe imigaqo yeelebhile zemveliso.
2. Ukuyikhupha irhasi kwindlela yomoya yemask yokuhamba yomoya ukuze i-hood icace gca.
3. Faka intwana encinci yesaline eqhelekileyo okanye ijeli enyibilikayo yamanzi ukuthambisa ukuthambisa ngasemva kwesigqubuthelo somqala.
4. Intloko yesigulana yabuya umva kancinci, isithupha sayo sasekhohlo sangena emlonyeni wesigulana kunye nokutsala kwemihlathi yesigulana, ukuze sandise umsantsa ophakathi komlomo.
5. Usebenzisa isandla sasekunene ukubamba usiba olubambe imaski yelilye, ukwenza ukuba kufumaneke, isalathiso somnwe kunye nomnwe ophakathi ngomnwe ngokuchasene nomzimba wokugquma kunye netyhubhu yokungena yomoya, gubungela umlomo kwicala elibheke ecaleni lomhlathi ophantsi , ulwimi lunamathela kwi-LMA ye-pharyngeal, kude kube kungasayi kubakho phambili ukuza kuthi ga ngoku. Kananjalo unokusebenzisa umva indlela yokufaka imaski yelaryngeal, gubungela umlomo ukuya kwinkalakahla, uya kubekwa emlonyeni uye emqaleni ezantsi kwesigqumathelo se-laryngeal, kunye ne-180O emva kokujikeleza, kwaye uqhubeke nokunyanzela imaski yomqala , kude kube ngoku akunakutyhala ukuza kuthi ga ngoku. Xa usebenzisa imaski eyandisiweyo okanye ye-ProSeal laryngeal ngentonga yesikhokelo, intonga yesikhokelo inokufakwa kumngxunya womoya ukufikelela kwindawo ebekiweyo, kunye nokufakwa kwilaryngeal imaski inokutsalwa emva kokufakwa kwemaski yelaryngeal.
6. Ukuhamba phambi kwesinye isandla ngobunono ngokucofa ngomnwe ukukhusela imaski yelaryngeal ukufuduswa kwecatheter.
7. Ngokwentlawulo ehlawulwayo yokugubungela ibhegi ezaliswe yirhasi (isixa somoya asinakugqitha kwelona nani liphezulu lokuzalisa), qhagamshela isekethe yokuphefumla kwaye uvavanye ukuba ngaba umoya ongenisa umoya, ofana nomoya okanye uthintelo, kufuneka ngokwamanqanaba okufakwa kwakhona imaski yelali.
8. Ukuqinisekisa indawo yemaski yokugcoba ichanekile, gubungela iphedi yamazinyo, indawo emiselweyo, ukugcina umoya.
9. Isikhuselo somqala siyatsalwa: umoya osemva kwesivingco somoya sesirinji ngesirinji ngaphandle kwenaliti uyatsalwa ngaphandle kwesigqubuthelo somqala.
1. Izigulana ezinethuba lokufumana isisu esigcweleyo okanye umxholo wesisu, okanye ezazinomkhwa wokugabha kunye nezinye izigulana ezazithambekele ekukhuphukeni.
2. Ukwandiswa okungaqhelekanga komguli opha kumatshini wokuphefumla.
3. Amandla okuphembelela izigulana, ezinje ngomqala obuhlungu, ithumba, ihematoma njl.
4. Isigulana asifanelanga ukusetyenziswa kwale mveliso.
1. Phambi kokusetyenziswa kufuneka kusekelwe kubudala, ubunzima bomzimba obukhethwe ngeendlela ezahlukeneyo ezichanekileyo kunye nokufumanisa ukuba ingaba ibhegi iyavuza na.
2. Nceda ujonge ngaphambi kokuyisebenzisa, njengokufumaneka kwimveliso enye (yokupakisha) inale miqathango ilandelayo, ukuthintelwa kokusetyenziswa:
a) Ixesha elifanelekileyo lokucoca inzalo;
b) Imveliso yonakele okanye inomzimba wangaphandle.
3. Usetyenziso kufuneka luqwalasele isigulana somsebenzi we-thoracic kunye nokukhuthaza isandi sokuphefumla somhlaba omabini ukumisela isiphumo sokungenisa umoya kunye nokuphelisa ukubekwa kweliso kwe-carbon dioxide. Njengokufunyanwa kweethora okanye ihlwempu okanye ukungaguquguquki kokuguquguquka kwesantya sokuva isandi esivuzayo, kuya kufuneka ikhuphe imaski yelaryngeal ngokukhawuleza, emva kweoksijini epheleleyo emva kokumiliselwa.
4. Uxinzelelo lomoya oluchanekileyo, uxinzelelo lomoya akufuneki lidlule kwi-25cmH2O, okanye ithambekele ekuvuzeni okanye kwigesi esiswini.
5. Izigulana ezinesigqubuthelo sobuso sokulala kufuneka zikhawuleze ngaphambi kokusetyenziswa, ukuthintela ukubakho kokuhamba okungafunekiyo komnqweno wokuqulathwe sisisu ngexesha lokungena komoya koxinzelelo.
6. Le mveliso yi-ethylene oxide inzalo, inzalo isebenza iminyaka emithathu.
7. Xa ibhaluni inyuselwe, isixa sentlawulo masingadluli kowona mlinganiselo uphezulu ulinganisiweyo.
8. Le mveliso yokusetyenziswa kweklinikhi, ukusebenza kunye nokusetyenziswa ngabasebenzi bezonyango, emva kokutshatyalaliswa.
Iimveliso kufuneka zigcinwe kubumanzi obulinganiselweyo obungadluli kwi-80%, iqondo lobushushu alikho ngaphezulu kwe-40 degrees Celsius, akukho zigesi ezonakalisayo kunye negumbi elifanelekileyo lokucoca umoya.
[Umhla wokwenziwa] Jonga ileyibhile yokupakisha yangaphakathi
[Umhla woshicilelo oluchaziweyo
Ukucaciswa komhla wokupapashwa: nge-30 kaSeptemba, 2016
Umenzi: HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
Egqithileyo I-Tube ye-Endotracheal eneNgcebiso ekhethekileyo
Okulandelayo: Abicah Foley Catheter ngoPhononongo lobushushu
Umzi mveliso weLaryngeal Mask Airway
imaski yelaryngeal yomenzi womoya
Umthengisi womoya we-laryngeal
Umzi mveliso wemaski wokulungisa
imaski yesilic laryngeal
Isilumko se-laryngeal mask yomoya
i-silicone laryngeal mask yomoya umenzi
i-silicone laryngeal mask umthengisi womoya
abicah imale laryngeal mveliso
Ukuphinda kusebenze kwakhona kweMask Laryngeal
Ezilahlwayo Anesthesia Vuvu
Ukuqiniswa kwe-Endotracheal Tube